10 ဂျာမနီမှာတော့သွားရောက်နိုင်ရန် romantic မြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဂျာမနီမှာတော့သွားရောက်နိုင်ရန် romantic မြို့ကြီးများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 20/12/2019)
ဥရောပဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံးဦးတည်ရာ တစ်ဦးရင်ခုန်စရာမြို့ထွက်ပြေးဖို့များအတွက်. သို့သျောလညျး, ဒါဟာကြီးမားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သကျကျဉ်းမြောင်းချင်ပေလိမ့်မည်. ကံကောင်းစွာ, ဂျာမဏီနှင့် ပတ်သက်. ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်, အထူးသဖြင့်ယင်း၏ ရင်ခုန်စရာမြို့ကြီးများနှင့်မြို့ရွာ. သူတို့ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်ခရီးစဉ်အပေါ်သင်ချစ်တဦးတည်းမယူအဘယ်ကြောင့်? သင်ဘယ်မှာသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ကူညီရန်, ဒီမှာပါ 10 ဂျာမနီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ရင်ခုန်စရာမြို့ကြီးများ:
တစ်ဦးကရိုမန်းတစ်စီးတီး: Rothenburg ob der Tauber
Rothenburg ဂျာမဏီခုနှစ်တွင်သွားရောက်နိုင်ရန်ရိုမန်းတစ်မြို့ကြီးများစာရင်းကိုပေါ်မှာငါတို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်, ဒါဟာနှစ်စဉ်ဧည့်သည်များသန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်တဲ့ပြီးပြည့်စုံသောရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မြို့ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ, ဒါရေပန်းစားသည်အဘယ်ကြောင့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်. အလယ်ခေတ်ကာလ၌စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, မရေမတွက်နိုင်တဲ့၏ပုံရိပ်ဖှယျ ကာတွန်းနှင့်ရုပ်ရှင်, Rothenburg သင်သည်မေ့လျော့မည်မဟုတ်တစ်မြို့နှင့်တစ်ဦးရိုမန်းတစ်မြို့ဖြစ်၏.
Bamberg ခုနစ်ခုတောင်ကုန်း၏ဂျာမန်မြို့ဖြစ်၏, တူသောအများကြီး အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့. ရုံရောမမြို့နဲ့တူ, ဒီရင်ခုန်စရာမြို့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်ပြည့်ဝ၏ သမိုင်းဝင်ဗိသုကာ သင်၏ခြေကိုချွတ်သင်လှည်းမည်ဟုကြောင်းနှင့်အမြင်များ. ပိုကဘာလဲ, Bamberg ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် "Little ကဗင်းနစ်" ခရိုင်ရှိပါတယ်, တစ်ဦးကြိုးတပ်စီးနင်းယူရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းရာ.
Aachen မြို့နှင့်နီးစပ်သော, Monschau ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်: ပါအမြင်များ, တစ်ဦးအကွေ့အကောက်များသော, မြစ်တမြစ်, နှင့်တစ်ဦး ညားရဲတိုက်, နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း. အဘယ်အရာကိုကပြီးပြည့်စုံရိုမန်းတစ်မြို့ကြီးများသဘောသဘာဝချစ်သူများအဘို့အဂျာမဏီ destination သို့ခုနှစ်တွင်သွားရောက်နိုင်ရန်စေသည်၎င်း၏လူအစုအဝေးဖြစ်ပါတယ် တောင်တက်လမ်းကြောင်း တောင်ငယ်အတွက်. ထို့အပွငျ, လျှင်သင် အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌သွားရောက်ကြည့်ရှု, သငျသညျက၎င်း၏ပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည် ရိုးရာခရစ္စမတ်စျေးကွက်.
တစ်ဦးက Romance ပုံပြင် – Meissen
Meissen သည့် Elbe မြစ်ပေါ်မှာထိုင်, ထိုသို့အားလုံးအတွက်အသက်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါသည် Saxony နှင့် A ရိုမန်းတစ်စီးတီး. အဆိုပါ Elbe ချိုင့်ဝှမ်း Meissen ထိုကဲ့သို့သောရင်ခုန်စရာအယူခံချေးငှားသည်ကားအဘယ်သို့. သို့သျောလညျး, ကြည့်ဖို့ကပိုရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ကြောင်းယင်း၏လှပသောအနီရောင်ခေါင်မိုးအဖြစ် ပရာ့ဂ်၏ဆင်တူ. ထို့အပွငျ, ဗိသုကာများ၏ချစ်သူများတစ်ဦး 16 ရာစုရဲတိုက်နဲ့ညား Gothic အဘိဓါန်ဘုရားကျောင်းမှာရှာဖွေစူးစမ်းခံစားနိုငျ.
ရထား Meissen မှဘာလင်
ရထား Meissen မှ Freiberg
ရထား Meissen မှ Cottbus
ရထား Meissen မှ Chemnitz
သငျသညျယဉျကြေးမှု၏ဝိညာဉ်ကိုခံစားရနှင့်ဤမြို့၏ကျက်သရေကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင် Heidelberg ပြီးပြည့်စုံသောလိုရာခရီးဖြစ်ပါသည်. ပိုကဘာလဲ, သငျသညျတောငျပျေါအပေါ်ရဲတိုက်အပျက်အယွင်းစူးစမ်းနှင့်သင့်ကိုခစျြတစျဦးနှငျ့တ Neckar မြစ်တစ်လျှောက်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ယူနိုင်ပါသည်.
ဂျာမနီမှာတော့သွားရောက်နိုင်ရန် romantic မြို့ကြီးများ – Freiburg
သငျသညျဂျာမဏီခုနှစ်တွင်သွားရောက်နိုင်ရန်ရိုမန်းတစ်မြို့ကြီးများရှာဖွေနေတဲ့အခါနေသာအချိန်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, Freiburg ထက်မထပ်မံကြည့်ရှု, နာမည်ကျော်များ၏အစွန်းပေါ် Black ကသစ်တော. ၏နယ်စပ်ကိုအနီးကပ် ဆွစ်ဇာလန်, သငျသညျမြို့ပြင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်များနှင့်အံ့သြဖွယ်စီးမြျှောလငျ့နိုငျ. Freiburg အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားရောက်စုံလင်သည်.
အဆိုပါ Bodensee ရေကန်၏ပင်လယ်ပြာရောင်ရေသည်နှင့် အဆိုပါအဲလ်ပ်တောင်တန်း Lindau ဝန်းရံ. ဒီနေရာတွင်အံ့ဖှယျအမြင်များကိုခံစားနိုင်ပါတယ်, အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောရေအားကစားနှင့် လှေခရီးစဉ်များ, တချို့ Romance. ထို့အပွငျ, Lindau အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌လှပ, အထူးသဖြင့်အခါ Bodensee ကိုလည်းသိမ်းဆည်း.
Trier ဂျာမနီမှာအသက်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်၏, ဒါဟာဂျာမနီခုနှစ်တွင်သွားရောက်နိုင်ရန်ရိုမန်းတစ်မြို့ကြီးများ၏စာရငျးတှငျ, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ဒါကြောင့်သင်ကလူဇင်ဘတ်ရန်အလွန်နီးကပ်သိ, ၏ဘဏ်များအပေါ်မတ်တပ်ရပ်ပြီးလျှင် Moselle မြစ် ထောင်နှစ်နှစျကျြော. ယင်း၏အလှအပသရုပျဖျောဖို့, Trier ရောမဗိသုကာဂုဏ်ယူ, အဖြစ်အလယ်ခေတ်နှင့် Gothic အဆောက်အဦးများ. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, ဒီထူးခြားတဲ့ရောစပ် Trier စစ်မှန်သောအံ့သြစရာစေသည်.
Trier ရထားမှ Koblenz
Trier ရထားမှ Frankfurt
Trier ရထားမှ Mainz
သငျသညျဂျာမနီမှာနေတဲ့မြစ်ရုဇ်သွားနေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့မှတ်တိုင်များတစ်ဦးအဖြစ် Cochem ထည့်သွင်းရန်သေချာစေပါ. စပျစ်ဥယျာဉ် နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် 11 ရာစုရဲတိုက်ဒီမြစ်မြို့နှင့်အလွန်ရင်ခုန်စရာမြို့၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြသည်.
ရထား Cochem မှ Frankfurt
ရထား Cochem မှ Bonn
ရထား Cochem ဖို့ Cologne
ရထား Cochem မှစတုဂတ်
ဂျာမနီမှာတော့သွားရောက်နိုင်ရန်ပြီးခဲ့သည့်ရိုမန်းတစ်မြို့ကြီးများ – Quedlinburg
ဤသည်အလွန်သေးငယ်သော အလယ်ခေတ်မြို့ ရိုမန်းတစ်မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်ခုနှစ်တွင်ဂျာမနီ၏စာရင်းတွင်လည်းရေတွက်နိုင်ပါသည်, ဒီမြို့က၎င်း၏နှင့်သင်၏အသက်ရှုပယ်ရှားတော်မူပါလိမ့်မယ် ချစ်စရာကောင်း cobblestone လမ်းများ နှင့် quaint အိမ်များ. ထို့အပွငျ, သမိုင်းချစ်သူများင်း၏ထူးခြားတဲ့သမိုင်းရှာဖွေစူးစမ်းပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်. ရှငျဘုရငျ Heinrich ငါ၏ကျိန်းဝပ်ရာအရပ်ကဲ့သို့, Quedlinburg သိသိသာသာမြို့ဖြစ်ပါသည်.
ဘာလင်မှ Quedlinburg ရထား
Hanover မှ Quedlinburg ရထား
Magdeburg မှ Quedlinburg ရထား
Bielefeld မှ Quedlinburg ရထား
သင်သင်၏နောက်ထွက်ပြေးဖို့အဖြစ်ကောက်ချင်ရာရိုမန်းတစ်မြို့ကြီးများဂျာမနီမှာသွားရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ? အဆိုပါများထဲမှတစ်ဦးခရီးစဉ်ကိုစီစဉ် 10 ဂျာမနီမှာအများဆုံးရင်ခုန်စရာမြို့ကြီးများနှင့် စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်အတူအချိန်ပေါ်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 ဂျာမနီမှာတော့သွားရောက်နိုင်ရန် romantic မြို့ကြီးများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fromantic-cities-visit-germany%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ဂျာမန် europetravel eurotrip စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော အချစ်ဇာတ်လမ်း trainjourney traintip ရထားခရီးသွား